Izindaba - Ingabe imaski iyabavikela abantu abawagqokile noma abantu ababazungezile?
Ingabe imaski iyabavikela abantu abawagqokile noma abantu ababazungezile?
"Ngicabanga ukuthi kunobufakazi obanele bokusho ukuthi inzuzo engcono kakhulu iwukuthi abantu abane-COVID-19 babavikele ekunikezeni i-COVID-19 kwabanye abantu, kodwa usazothola inzuzo ngokugqoka imaskhi uma ungakwenzi." anginayo i-COVID-19,” kusho uChin-Hong.
Izifihla-buso zingase zisebenze kangcono “njengokulawula umthombo” ngoba zingavimbela amaconsi amakhulu axoshiwe ukuba ahwamuke abe amaconsi amancane angahamba ibanga elide.
Esinye isici okufanele usikhumbule, kuphawulwe uRutherford, ukuthi usengalibamba igciwane ngolwelwesi lwamehlo akho, ingozi yokuthi imaski ayiyiqedi.
Ingabe uhlobo lwemaski lubalulekile?
Ucwaningo luqhathanise izinto ezisetshenziswa umaski ezihlukahlukene, kodwa emphakathini jikelele, ukucatshangelwa okubaluleke kakhulu kungase kube induduzo.Imaski ehamba phambili yileyo ongayigqoka ngokunethezeka nangokungaguquguquki, kusho uChin-Hong.Ama-N95 respirators adingeka kuphela ezimweni zezokwelapha ezifana nokufaka intubation.Amamaski okuhlinzwa ngokuvamile avikela kakhulu kunamaski endwangu, futhi abanye abantu bawathola elula futhi ekhululekile ukuwagqoka.
Okubalulekile ukuthi noma iyiphi imaski evala ikhala nomlomo iyoba yinzuzo.
"Umqondo uwukunciphisa ubungozi kunokuvimbela ngokuphelele," kusho uChin-Hong.“Awuzilahli izandla zakho uma ucabanga ukuthi imaski ayisebenzi ngamaphesenti ayi-100.Kuwubuwula lokho.Akekho ophuza umuthi we-cholesterol ngoba uzovikela isifo senhliziyo ngamaphesenti ayi-100, kodwa unciphisa kakhulu ingozi yakho. "
Kodwa-ke, bobabili uRutherford noChin-Hong baxwayise ngomamaski be-N95 abanamavalvu (avame ukusetshenziswa ekwakheni ukuvimbela ukuhogela uthuli) ngoba abavikeli abaseduze kwakho.Lawa ma-valve endlela eyodwa ayavala lapho ogqokile ephefumula, kodwa avuleke lapho ogqokile ephefumula, avumele umoya ongahlungi namaconsi ukuba kuphume.UChin-Hong uthe noma ngubani ogqoke imaskhi ene-valve uzodinga ukuthi agqoke imaskhi yokuhlinzwa noma yendwangu phezu kwayo."Okunye, vele ugqoke imaskhi engenawo amavalvu," esho.
ISan Francisco icacise ukuthi imaski enamavalvu ayihambisani ne-oda lokumboza ubuso bedolobha.
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi - I-AMP Mobile Imaski yaseChina, I-Pharmacy Surgical Mask, I-FFP2 Respirator, I-China Protective Mask, I-PPE Mask, Imaski yobuso,